Botany Term: Cinnamomum camphora Nees Species/Family: Lauraceae ပုံသဏ္ဌာန်: အပင်-- အပင်လတ် မျိုးဖြစ် သည်။ အမြင့်ပေ ၃၀-၄၀ အထိ မြင့်၏။ အကိုင်း များ များစွာ ဖြာထွက် လေ့ ရှိသည်။ပင်စည် ဖြောင့်မတ် သည်။ အရွက်-- ရွက်လွှဲ ထွက်သည်။ ဘဲဥပုံ ရှိသည်။ ရွက်ရင်း ...
Species/Family: Labiatae Botany Term: Mentha arvensis Linn. M.pierita. M.javanica. M.ayoname ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် နှစ်ရှည်ခံ ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ၁ ပေ မှ ၁ ၁/၂ ပေ ထိ မြင့်သည်။ ပူဒီနာပင် နှင့် တူသည်။ အကိုင်း အခက်ရှိ အဆစ် များမှ အမြစ်များ ထွက်၍ မြေကြီး ...
Species/Family: Piperaceae Botany Term: Dried Catkins ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် - အမြဲ စိမ်း နွယ်ပင် မျိုးဖြစ်သည်။ ကွမ်းပင် နှင့် တူသည်။ ပင်စည် လုံး၍ အဆစ် များ ရှိသည်။အကိုင်း အခက် များ သေးငယ်ပြီး ထောင်မတ် နေသည်။ အဖိုပင်၊ အမ ပင် ဟူ၍ ရှိသည်။ အရွက်-- ရွက်လွှ ...
ပီလောပီနံပင် သို့မဟုတ် ကလောပင် သည် နှစ်ရှည်ခံ ချုံပုတ်ပင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ပင်စည်မှာ သစ်သားကဲ့သို့ မာကျော၍ အူတိုင်အခေါင်းပွသည့် Euphobiaceae မျိုးရင်းဝင်အပင် ဖြစ်ပါသည်။ ​Cassava, Yucca, Manico စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ခေါ်ဆိုကြပြီး သိပ္ပံအမည်မှာ ​M ...
ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် - အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ပင်စည် ကောက်ကွေ့ သည်။အခေါက် မီးခိုးရောင်ရှိ ပြီး ချောမွတ် သည်။ အပင်မှ ပယင်းရောင် အစေး တစ်မျိုး ထွက်၏။ အရွက် - -- ရွက်ဆိုင် ထွက်သည်။ဘဲဥ ပုံသဏ္ဌာန် ရှိ၍ ရွက်ရင်း ဝိုင်းပြီး ရွက်ထိပ် ချိုင့်သည်။ အလျား ၄ လက်မ ...
အချို့က ပူစီနံ ဟု ခေါ်ကြသည်။ မြန်မာအစားအသောက် တွင် ထည့်ချက်သော ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ပူစီနံ၏ အခြားထူးခြားချက်မှာ ဆေးဖက်လည်းဝင်လေသည်။ သက်ရွယ်မရွေး ညအိပ်မပျော်သော သူများအတွက် အိပ်ယာဝင်ခါနီး ၎င်း အရွက်အား ရေနွေးပူပူထဲ၌ လက္ဘ်ခြောက်ခက ...
ပေပင် သည် အပူပိုင်းအပူပိုင်းအရပ်ဒေသ၌ ပေါက်လေ့ရှိသည်။ ထန်းပင်နှင့် အနည်းငယ်တူသည်။ ပေပင်၏အသီးသည် သေးငယ်သည်။ ပေပင်မှ ပေရည်ကိုရသည်။ ငန်သောအရသာရှိသည်။ ထန်းပင်ထက် လုံးပတ်ကြီး၍ အရွက်လည်းကြီးသည်။ ပေပင်၏အသက်မှာ နှစ် ၆၀ခန့် ရှည်သည်ဟု ဆိုသည်။ ပေတစ်သီး ကျီးတ ...
မြန်မာဆေးကျမ်းများအလိုအရ ပေါက်သည် ဖန်ခါးစပ်သောအရသာ ရှိသည်။ ပူသည်၊ ဝမ်းမီးကို တောက်စေသည်။ သုက်ကို ပွားစေသည်။ ကျိုးသော အရိုးကို ဆက်စေသည်။ ဆီးရွှင်စေသည်။ အပွင့်သည် ဖန်ခါးစပ်၏၊ အေး၏၊ လေကို ပွားစေ၏ ။သည်းခြေသလိပ် ကို နိုင်သည်။ ဆီးပူခြင်း၊ ဆီးအောင့် ခြင ...
အသီး တောင့်ရှည် ဖြစ်သည်။ တွဲလျားကျနေသည့် သီးတောင့် တစ်ခုတွင် အစေ့များစွာ ပါရှိ၏ ။ နတ်တော်လမှ တပို့တွဲလအတွင်းအသီး ရင့်သည်။
စိမ်းစားဥကို ပဲစိမ်းစား သို့မဟုတ် ပဲစိမ်းစားဥဟူ၍ ခေါ်သည်။ ပဲမြစ်များရရှိသော ပဲစောင်းလျားပင်ကဲ့သို့ စိမ်းစားဥပင်သည် ဥအတွက်စိုက်ပျိုးသော ပဲပင်မျိုးဖြစ်သည်။ ရုက္ခဗေဒအလိုအားဖြင့် စိမ်းစားဥပင်ကို ပက်ခီရီဇပ် အင်ဂူး လေတပ် ဟု ခေါ်သည်။ ယင်း၏မျိုးရင်းမှာ လ ...
ပျဉ်းတော်သိမ်သည် အပွင့် ပွင့်သည့် အပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည့်ပြင် ဩစတေးလျတိုက်နှင့် အာရှတိုက်တွင် ပေါက်ရောက်သည့် အပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ မျိုရင်း Rutaceae တွင် ပါဝင်သည့် မျိုးရင်းခွဲ အမြဲစိမ်းအပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည့် Aurantioideae ၏ မျိုးစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းအပ ...
Botany Term: Cassia glauca Lam Species/Family: Caesalpiniaceae ပုံသဏ္ဌာန်: အပင်-- အပင်ငယ် မျိုး ဖြစ်သည်။ အမြင့် ၁၀ ပေ ကျော် ထိ ရှိ၏။ အကိုင်း အခက် များ၍ တောက်ပြောင် သော အရောင် ရှိသည်။ အရွက်-- ရွက်ပေါင်း ဖြစ်ပြီး ရွက်လွှဲ ထွက်သည်။ ၅ လက်မ ၉ လက်မ ထိ ...
Species/Family: Caesalpiniaceae Botany Term: Cassia angustifolia Vahl ပုံသဏ္ဌာန်: ချုံပင်ပျော့မျိုးဖြစ်သည်။ ငှက်မွေးရွက်ပေါင်းဖြစ်၍ ရွက်မြွာလေးများ သုံးစုံမှ ခုနစ်စုံ အထိရှိသည်။ ရွက်မြွာများသည် ရှည်မျောမျောဖြစ်၍ ရွက်ထိပ်ဝိုင်းသည်။ အစိမ်းဖျော့ ရော ...
Species/Family: Zingiberaceae Botany Term: Elettaria cardamomum Maton ပုံသဏ္ဌာန်: အပင်-- နှစ်ကြာခံ အမြဲ စိမ်းလန်းသောအပင် ဖြစ်သည်။ ပတဲကောပင်နှင့် ဆင်ဆင် တူသည်။ မြေအောက် ပင်စည် ရှိသည်။ အစုလိုက် ဘေးဘက် သို့မဟုတ် မတ်မတ် ထောင်၍ ထွက်တတ်သည်။ အရုံ တစ်ရုံ ...
ချောကလက်၊ ကိတ်မုန့်၊ ရေခဲမုန့် စသည်တို့ ပြုလုပ်ရာ၌၎င်း၊ ရေမွှေးအမျိုးမျိုး ဖော်စပ်ရာ၌၎င်း အသုံးပြုသော ဗနီလာအမွှေးနံ့ကို ဗနီလာပင်၏ အသီးတောင့်မှ ထုတ်ယူရရှိသည်။ ဗနီလာပင်သည် သစ်ခွပင် တစ်မျိုးဖြစ်၍ ကြီးမားရှည်လျားသော နွယ်ပင်ဖြစ်သည်။ အောကီဒေးစီအီးမျိုး ...
အခိုင်လိုက် သီးသည်။ လုံး၍ ရှည်မျောမျောပုံရှိ၏။ ခွံပျော့တစ်စေ့သီး ဖြစ်ပြီး အစေ့သည် ကျည်စေ့ကဲ့သို့ မာမာအလုံးကလေး ဖြစ်ကာ တောက်ပြောင်သော အနက်ရောင် ရှိသည်။
ဗောဓိညောင်ပင် သို့မဟုတ် ဗောဓိပင်ဟူသည် ဘုရားရှင်တို့ သဗ္ဗညုတတည်းဟူသော ဗောဓိဉာဏ်တော် ရရန် အားထုတ်ရာ၌ အမှီပြုသော အပင်များ ဘုရားပွင့်တော်မူရာ အပင်များဖြစ်သည်။ ထိုအပင်များကို ဌာနျူပစာအားဖြင့် ဗောဓိပင်ဟု ခေါ်သည်။ ဂေါတမဘုရားအလောင်းတော်သည် ညောင်ဗုဒ္ဓဟေ ပ ...
ဘိင်္ဂပင်သည် ရူဗီအေစီအီး မျိုးရိုးတွင်ပါဝင်၍ ယင်းကို ရုက္ခဗေဒ အလိုအားဖြင့် စတက်ဖီဂျင်နီ ဒိုင်ဗာစီ ဖိုလီယာဟုခေါ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တလျှောက်တွင် မြောက်ဘက် အထက်ချင်းတွင်းအရပ်မှ တောင်ဘက် ထားဝယ် နယ်အထိ မြေညီသစ်တောများ၌ ဘိင်္ဂပင်များကို တွေ့နိုင်သည်။ ဘ ...
ဘိန်းပင် သည် ဥယျာဉ်များထဲတွင် အလှ စိုက်ပျိုးသော ပန်းပင်မျိုးဖြစ်၍ အမျိုးပေါင်း ၅ဝ ခန့်မျှ ရှိသည်။ ပန်းပွင့်များမှာ အပင်းအမျိုးကိုလိုက်၍ အဖြူ၊ အနီး၊ ပန်းရောင်၊ အဝါ၊ လိမ္မော်၊ ကြက်သွေး စသည်ဖြင့် အရောင် အမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ ငိုက်နေသော အဖူးများ၊ လှပစ ...
သစ်ပုပ်ပင် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ စောဖျပင်ဟူ၍လည်းကောင်း ခေါ်သော ဘိုင်ပင်သည် ဒက်တစ်ကေ စီအီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ယင်းကို ရုက္ခေဒေအလိုအားဖြင့် တက်တြာမီလီ နျူဒီဖလိုရာ ဟုခေါ်သည်။ အထက်နှင့် အောက်မြန်မာနိုင်ငံ ချိုင့်ဝှမ်းဒေသများ၌ ပေါများ၍ တစ်ခါတစ်ရံ အစုလိုက်ပ ...
ဘီသွာလျှော်ကို ဘီသွာပင်၏ ပင်စည်မှ ခွာယူရသည်။ ဘီသွာပင်ကို နှမ်းချပ်ပင်၊ ဘီသွာလျှော် ကို နှမ်းချပ်လျှော်ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ ဘီသွာလျှော်သည် ဝါချည်ပြီးနောက် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသုံးအများဆုံးသော ချည်ဖြစ်သည်။ အမျှင်ခိုင်၍ နူးညံ့သည်။ ပိုးရောင်ကဲ့သို့ အရောင်တော ...
အင်္ဂလိပ် အမည်ဖြင့် ဗတ်ချဟုခေါ်သော သစ်ပင်မျိုးကို ရှေးမြန်မာ စာပေကျမ်းဂန်တို့၌ ဘုဇပတ်ပင်ဟု ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ယခုခေတ်တွင်မူချယ်ရီဖိုပင် ဟု ခေါ်တွင်လျက်ရှိသည်။ ထိုအပင်တို့သည် မြောက်အမေရိကတိုက်၊ ဥရောပတိုက်၊ အာရှတိုက် မြောက်ပိုင်း ဒ ...
ဘုမ္မရာဇာပင် သည် အပေါ့ဆီနေစီအီး မျိုးရင်းနှင့် ရောဗောဖီးယား မျိုးစုတွင် ပါဝင်သည်။ ယင်း၏ ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ ရောဗောဖီးယား ဆာပင်တီးနားဖြစ်သည်။ ဘုမ္မရာဇာပင်သည် အမြင့် ၃ ပေကျော် ၄ ပေခန့်ရှိ၍၊ တည့်တည့်မတ်မတ် တက်သောချုံပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ ပင်စည် လုံးများတွင် ...
Botany Term: Blumea balsamufera DC Species/Family: Compositae ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် - အပင်ငယ် တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အမြင့် ၅-၁၀ ပေ ထိ မြင့် သည်။ အပင်တွင် အစေးများ ရှိသည်။ ပင်စည် အရင်းမှ စ၍ ကိုင်းဖြာသည်။ ပင်စည် အခေါက် ချောမွေ့ ၍ အမျှင် လိုက်ဖြစ်ပြီး မွဲခြေ ...
အပူပိုင်းဒေသ အထူးသဖြင့် အတန်ငယ်ခြောက်သွေ့သော ဒေသတွင် စိုက်ပျိုးကြသည်။ ခြံဝင်းအနည်းငယ်ရှိသော အိမ်ယာများတွင် အိမ်တွင်းဟင်းခင်းအဖြစ် စင်ကလေးများ ထိုး၍ပင် စိုက်ပျိုးလေ့ ရှိကြသည်။
ဘွဲ့ချဉ်ပင်သည် စွယ်တော်၊ ဖလံ၊ မစာလှေကား၊ ဝါပင်တို့နှင့်အတူ လီဂူမီနိုးစီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ယင်း၏ ရုက္ခဗေဒ အမည်မှာ ဗော်ဟီးနီးယား ဗေရီးဂေတာဖြစ်သည်။ တောသစ်ပင် အလတ်စားဖြစ်၍ ပေ ၂ဝ မှ ၃ဝ ထိမြင့်သည်။ အခေါင်မှာကြမ်း၍ ညိုသောအရောင် ရှိသည်။ ဘွဲ့ချဉ်ပင်၏ ...
မက်လင်ပင်သည် ဗုံဗကေး စီအီးမျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ယင်းကို ရုက္ခဗေဒအလိုအားဖြင့် အက်ဒန်ဆိုးနီးယား ဒစ်ဂျီတေး တား ဟုခေါ်သည်။ မက်လင်ပင်၏ မူလပေါက်ရာအရပ်မှာ အာဖရိကတိုက် အလယ်ပိုင်းရှိ ခြောက်သွေ့သောဒေသများဖြစ်၍ အသက်အလွန်ရှည်ပြီးလျှင် သစ်ပင်လုံးပတ် အလွန်ကြီးသ ...
Species/Family: Liliaceae Botany Term: Fritillaria roylei Hook ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် ပင်ပျော့ပင်ငယ်မျိုးဖြစ်၍ အမြင့် ၁ ပေခန့်ရှိသည်။ ရေခဲပြင်အောက် ၌ပေါက်ရောက်သော အပင်မျိုးဖြစ်သည်။ ပင်တည်းဖြစ်၍ ပင်စည် အစိမ်းရောင်ရှိပြီး ချောမွေ့သည်။ အရွက် ရွက်ဆိုင်ထွက် ...
Species/Family: Convolvulaceae Botany Term: Argyreia barbigera Chois ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် အခြား အပင်ကို မှီ၍ တက်တတ်သော နွယ်ပင် မျိုး ဖြစ်၏ ။ သို့မဟုတ် မြေလျှောက်ပင် ဖြစ်၏ ။ အရွက် ပင်စည်မှ တစ်ရွက် ချင်း ခပ်ကျဲကျဲ ရွက်လွှဲ ထွက်၏ ။ ကွမ်းရွက် ပုံသဏ္ဌာန် ...
မင်းကွတ်ပင်သည် ဂတ်တစ်ဖာရီးမျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ယင်းကို ရုက္ခဗေဒအလိုအားဖြင့် ဂါစင်းနီးယား မန်ဂိုစတားနား ဟုခေါ်သည်။ မင်းကွတ်ပင်၏ မူလပေါက်ရာအရပ်မှာ မလ္လာယု ကျွန်းဆွယ်ဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ တဆင့်ယူဆောင် စိုက်ပျိုးသည့် အပင်လတ်မျိုးဖြစ်သည်။ မင်းက ...
သေးငယ်၍ အမြှောင်းများ ရှိသည်။ အထဲတွင် အစေ့ တစ်စေ့ ပါသည်။ အစေ့ ငရုတ်ကောင်း နှင့် တူ၏။ နုစဉ်တွင် စိမ်း၍ ရင့်သော အခါ မည်းနက် သွား၏။
ရုက္ခဗေဒ အလိုအားဖြင့် မဒမပင်ကို ဒယ်လဗား ဂျီးယား အိုဗားတားဟု ခေါ်သည်။ ထိုအပင်သည် လီဂူမီနိုးစီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ မဒမင်သည် အပင်လတ်မျိုးဖြစ်၍ အမြင့်ပေ ၃ဝ မှ ၄ဝ အထိရှိသည်။ အသီးတောင့်သည် အလွန်ပြား၍ အထဲတွင် အစေ့တစ်ခုနှစ်ခုသာ ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ...
မန်ကျည်း သည် Fabaceae မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ Tamarindus မျိုးစုသည် မျိုးစိတ်တစ်ခုတည်းသာ ရှိသောမျိုးစုဖြစ်သည်။ မန်ကျည်းသည် မုတ်သုန်ရာသီဥတုတွင် ပေါက်မြောက်သော အပင်ဖြစ်ပြီး ဆူဒန် နှင့် မဒါဂတ်စကား ၏ အစိတ်ပိုင်း ရွက်ကြွေတောများ အပါအဝင် မုတ်သုံ အာဖရိက ...
မယ်ဇလီပင် သည် လီဂူမီနိုးစီအီးမျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ယင်းကို ရုက္ခဗေဒ အလိုအားဖြင့် ကက်စီယာ ဆိုင်းရမ်းမီးဟု ခေါ်ဝေါ်သည်။ မယ်ဇလီပင်သည် ဆယ့်နှစ်ရာသီစိမ်းလန်းသော သစ်ပင်ဖြစ်၍ အထက်အောက်မြန်မာနိုင်ငံရှိ သစ်တောများ၌ ပေါက်သည်။ အစေ့ကို စိုက်ခြင်းဖြင့် အလွယ်တက ...
မရန်းပင်သည် ဆယ့်နှစ်ရာသီ စိမ်းလန်းသော အပင်လတ်မျိုးဖြစ်၍ အမြင့်ပေ ၄ဝ ထိရှိသည်။ ရုက္ခဗေဒ အလိုအားဖြင့် ဗိုအီ အိုပေါဇီတီဖိုလီယာဟုခေါ်၍ အန်နကာ ဒီအေးစီအီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တနင်္သာရီ တိုင်းနှင့် ကပ္ပလီကျွန်းစုတွင် အလွန်ပေါများသည်။ မ ...
Botany Term: Calotropis procera R.Br Species/Family: Asclepiadaceae ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် -ချုံယောင် ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၍ အမြင့်ပေ ၁၀-၁၅ ပေထိ မြင့် ၏ ။ ပင်စည် ရိုးတံဖြောင့် ၍ အစေးဖြူ များ ရှိ၏ ။ အရွက် -ရွက်လွှဲ ထွက်သည်။ အရွက် အလယ်ပိုင်း ကျယ်ပြန့် ၍ အဖျား ...
Botany Term: Euonymus kachinensis Prain Species/Family: Celastraceae ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် အပင်ငယ် မျိုး ဖြစ်သည်။ အမြင့် ၁၂ ပေ ခန့် ထိ မြင့်၏ ။ အကိုင်း ဖြာသည်။ ပင်စည် ခပ်မွဲမွဲ ညိုခြောက်ခြောက် အရောင် ရှိ၏ ။ အရွက် ရွက်လွှဲ ထွက်သည်။ အရွက်မှာ ဘဲဥ ပုံမှ လ ...
မလွှပင် သည် ဖက်သန်းပင်၊ သခွတ်ဖိုပင်တို့နှင့် အတူ ဗစ်နိုးနီအေးစီအီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ ရုက္ခဗေဒ အလိုအားဖြင့် ယင်းကို ဒေါ်လီချန်ဒရုန်း စတီပျူလာတာဟု ခေါ်သည်။ မလွှပင်သည် အပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၍ ယင်း၏ အပွင့်သည် ခရာပုံဖြစ်၍ အရောင်မှာ အဝါရောင် ဖျော့ဖျော ...
မဟောဂနီပင် သည် အမြဲစိမ်း အပင်ကြီးမျိုးဖြစ်၍ အနောက်အိန္ဒိယကျွန်းစုနှင့် အမေရိကတိုက် အပူပိုင်းဒေသများတွင် ပေါက်ရောက်သည်။ သာမန်အားဖြင့် ပေ ၁ဝဝ ခန့်ထိ မြင့်သော်လည်း ကြီးထွားရာ၌ အလွန်နှေးကွေးသည်။ ပင်စည်လုံးပတ်မှာ တစ်ခါတစ်ရံ ၁၂ ပေထိရှိ၍ တုတ်ခိုင်ကြီးမာ ...
မအူပင်သည် ရုဗီအေစီအီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ယင်းကို ရုက္ခဗေဒ အလိုအားဖြင့် ဆာကိုဆီဖားလပ်ကောဒေးတပ်ဟု ခေါ်သည်။ မအူပင်မျိုး အများအပြားရှိရာ မအူ လက်တံရှည်ပင်၊ မအူကတုံးပင်၊ မအူလေလံပင်နှင့် မအူကြီးပင်တို့မှာ မအူပင်နှင့်မျိုးတူ ပင်မျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ မအူ ...
Species/Family: Acanthaceae Botany Term: Hygrophila phlomoides Nees ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် - ချုံဆန်သော တစ်နှစ်ခံ ပင်ပျော့ ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အမြင့် ၁၁/၂ -၃ ပေ ခန့် ရှိသည်။ ပင်စည်နှင့် ရိုးတံ လေးထောင့် ပုံဖြစ်ပြီး အနည်းငယ် မာကျော ၏ ။ ပင်စည်ဆစ် များမှ ...
မိဿလင်ပင်သည် ချင်းစိမ်း၊ ပတဲကောကြီး၊ ပတဲကောလေး၊ နနွင်းတို့နှင့်အတူ ဇင်ဂျီဗာရေးစီအီး မျိုးရင်းတွင်ပါဝင်၍ ယင်း၏ ရုက္ခဗေအမည်မှာ ဇင်ဂျီဗာ ဗာဗေတမ် ဖြစ်သည်။ မိဿလင်ပင်သည် အမြင့် ၃ ပေကျော်ခန့် ရှိ၍ ချင်းစိမ်းပင်ကဲ့သို့ ပင်စည်တစ်လျှောက် ရွက်လွှဲများ ရှိကြ ...
မုန်ညင်းခါးပင်သည် ပေါ်လီဂိုနေစီအီးမျိုးရင်းတွင် ရီအမ် မျိုးစု၌ ပါဝင်၍ ယင်း၏ ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ ရီအမ် ရာပွန်တီကမ်ဖြစ်သည်။ မုန်ညင်းဟုခေါ်သော်လည်းမုန် ်ညင်းနှင့် မျိုးရင်းချင်း မတူချေ။ သို့သော် ရှရီမန်ပင်နှင့်ကား မျိုးရင်းချင်းတူ၍ နီးစပ်သည်။မုန်ညင်းခါး ...
မုန်ညင်းပင်သည် ကရူစီဖာရီး မျိုးရင်းတွင် ဗရပ်ဆီကာ မျိုးစု၌ ပါဝင်၍ ယင်း၏ ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ အဖြူမျိုးကို ဗရပ်ဆီ ကာ အဲလဗာဟူ၍ လည်းကောင်း၊ အမည်းမျိုးရင်းကို ဗရပ်ဆီကာ နိဂရာ ဟူ၍ လည်းကောင်းခေါ်သည်။ အရွက်ပေါများသော ဤ မုန်ညင်းပင်မားကို ကမ္ဘာ့သမပိုင်းဒေသများတွ ...
Botany Term: Brassica alba Hook Species/Family: Cruciferae ပုံသဏ္ဌာန်: အပင်---ရာသီပင် မျိုး ဖြစ်၍ အမြင့် ၂ ပေခန့် ရှိသည်။ အရွက်--- မြေမှ ကပ်၍ ထွက်သည်။ ရွက်ရင်း ပိုင်း မာ၍ ရွက်ပြား ရွက်နား အဝိုက်များ ရှိသည်။ ရွက်ရိုး ဖြူသည်။ ရွက်ညှာ ရှည်၍ အသားပွ ပ ...
မုန်တိုင်ပင် သည် ဆဲလပ်စတြေးစီအီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ယင်းကို ရုက္ခဗေဒ အလိုအားဖြင့် လိုဖိုပက်တလမ် ဝေါ်လီချီးဟုခေါ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ မိုးပါးသော အရပ်တို့၌ ရှိသည့် အင်တိုင်းတောများတွင်များစွာ ပေါက်ရောက်သည်။ မုန်တိုင်ပင် သည်အမြင့်၃၅ ပေမှ ၄၅ ပေအထိ ရှ ...
Botany Term: Adhatoda Vasica Nees Species/Family: Acanthaceae ပုံသဏ္ဌာန်: အမြဲစိမ်း ချုံပင်ပျော့မျိုးဖြစ်သည်။ အရွက်သည် ဘဲဥပုံ၊ လှံစွပ်ပုံ ရှိသည်။ အပေါ်မျက်နှာပြင်သည် အစိမ်းရင့်ရောင်ဖြစ်၍ အောက်ဖက် မျက်နှာပြင်သည် အစိမ်းရောင်ဖျော့သည်။ ရွက်ထိပ်ချွန်သ ...
မုလေးပန်းကို မုလေးပင်မှ ရရှိသည်။ ထိုမုလေးပန်းကိုပင် မြတ်လေးပန်းဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ မုလေးပင်ကို ရုက္ခဗေဒအလိုအရ ဂျပ်စမင်နမ် ဂရန်ဒီ ဖလိုရမ် ဟုခေါ်သည်။ မူလပေါက်ရာအရပ်မှာ ဟိမဝန္တာတောင်၏ အနောက်မြောက်ဘက် ဒေသဖြစ်၏။ ယခုအခါတွင် ကမ္ဘာဟောင်းနှင့် ကမ္ဘာသစ် နှစ် ...
ရုက္ခဗေဒ အမည်အားဖြင့် မေပယ်ပင်သည် အေဆာရေးစီအီး မျိုးရင်းတွင်ပါဝင်သည်။ မေပယ်ပင်မျိုးပေါင်း ၁ဝဝ ခန့်မျှရှိရာ အားလုံး၏ မူလပေါက်ရာ အရပ် မှာ မြောက်သမပိုင်းဇုန်ဒေသများဖြစ်သည်။ မေပယ်ပင်တွင် စိမ်းလန်းသော အရွက်များဖြင့် အုပ်အုပ် ဆိုင်းဆိုင်းရှိသောကြောင့် ...
မျောက်ချောပင်သည် ဆမ္မီဒေးစီအီးမျိုးရင်း တွင် ပါဝင်၍ ရုက္ခဗေဒအလိုအားဖြင့် ယင်းကို ဟုမ္မာလီယမ် တိုမင်တိုဆမ်ဟုခေါ်သည်။ မျောက်ချာပင်သည် မြင့်သော တောသစ်ပင်မျိုးဖြစ်၍ အထက်အောက် မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောများ၌ အနှံ့အပြား တွေ့ရသည်။အပင်ဖျား၌သာ အကိုင်းအခက် အရွက် ...